Obama iyo Romney oo Markii Labaad Doodday
Sunday, May 19, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 07:44
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo murashaxa xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney ayaa yeeshay dooddii labaad. Dooddu waxay ka dhacday Jaamacadda Hofstra ee gobolka New York. Labadooda waxa su'aalo weydiinayey dad Maraykanka oo aan iyagu wali go'aan san dhinacii ay u codeyn lahaayeen.
Falanqeynta doodda waxa ka qeyb galay Xaashi Shaafi oo ah madaxa xarunta Somali Action Alliance, kuna sugan gobolka Minnesota iyo Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka mid ah maamulka shabakadda Wardheernews, kuna sugan gobolka California.
Waxa iyaguna weydiinta su'aalaha ka qeyb qaatay Ibrahim Aadam Maxamed (Faransa) oo ka tirsan Idaacadda Jubba FM ee magaalada Muqdisho iyo Yuusuf Axmed Abukar (Keynaan) oo ka tirsan Idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, labada idaacadoodba waxay bahwadaag la yihiin Idaacadda VOA
Falanqeynta oo dhameystiran hoosta ka dhageyso.
Dooddi Labaad ee Obama iyo Romney